1994 ခုနှစ်ဖွား K-pop Oppa များ – Trend.com.mm
1994 ခုနှစ်ဖွား K-pop Oppa များ
Posted on June 24, 2020 by Mya Thet
J-Hope လို့လူသိများတဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jung Ho-seok
ကိတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂွမ်ဂျူ မြို့လေးမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါနော်။ အခုဆိုရင်အသက် J-Hope အိုပါးကတော့ ဂွမ်ဂျူမြို့သားလေးပါနော်။
Rap Monster လို့လူသိများတဲ့ Kim Nam-joon ကိုတော့ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်၊၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့၊ Dongjak-gu မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့အ RM ရဲ့အသက်က ၂၅ ပြည့်တော့မှာပါနော်။
Oh Se-Hun ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ၁၂ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။K-pop Fan တွေရဲ့အချစ်တော် Sehun oppa ကတော့ Fan တွေရဲ့အချစ်တွေအကုန်လုံးကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူကြီးပါနော်။
Body အမိုက်စားနဲ့ မိန်းကလေးfan တွေအသည်းကိုချွေနေတာကတော့ EXO အဖွဲ့ရဲ့ Kai ဆိုရင်လဲမမှားပါဘူးနော်။ Kai လို့လူသိများတဲ့ Kim Jong-in ကိုတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ Suncheon, South Jeolla မှာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။
ဒီတစ်ယောက်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံသားလေး GOT7 အဖွဲ့ဝင်Jackson ပါ။ သူ့ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ဟောင်ကောင်ရဲ့ KowloonTong မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ သူ့ကို ခေါ်ကြတဲ့တခြားနာမည်တွေကတော့ Wang Ka-yee, Wang Jia’er တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
6. Jinhwan (iKON)
၁၉၉၄ ခုနှစ်ဖွားနောက်တစ်ယောက်ကတော့ iKON အဖွဲ့ဝင် Jinhwan ပါ။ Jinhwan လို့လူသိများတဲ့ အဆိုတော် Kim Jin-hwan ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီယားနိုင်ငံရဲ့ အလှပဆုံးနေရာတွေထဲမှာပါတဲ့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ ဂျယ်ဂျူဒိုမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။
7. Ha Sungwoon
အဆိုတော်နှင့် တေးရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ha Sung-woon ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Gyeonggi ,Goyang မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
8. JB (GOT7)
JB လို့လူသိများတဲ့ GOT7 အဖွဲ့ဝင် Lim Jae-beom ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် Goyang မှာမွေးဖွးခဲ့ပြီးအခုဆိုရင် အသက် ၂၆ တောင်ပြည့်ပြီးပါပြီနော်။
မျက်နှာချောချောလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ One လို့လူသိများတဲ့ Jung Je-won ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊မတ် ၂၉ မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ဆိုးလ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
10. Seungwoo (VICTON)
Han Seung-woo ကတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါနော်။သူ့ကိုတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂွမ်ဂျူမြို့၊ Geumgok မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။မွေးနေ့ကတော့ ၁၉၉၄၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ပါနော်။
11. Jinyoung (GOT7)
Park Jin-young ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ Jinhae-gu မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။
12. Hyungwon (MONSTA X)
မျက်နှာသွယ်သွယ်လေးနဲ့ fan girls တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိထားသူက Chae Hyung-won ပါ။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီ ၁၅ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊Gwangju, Gwangsan-gu မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။
13. Joohoney (MONSTA X)
Joohoney လို့အသိများတဲ့ Lee Joo-heon ကတော့ ပြုံးလိုက်တိုင်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပါးပေါ်က ပါးချိုင့်လေးကြောင့်လဲ အတော်လေးကို ကြွေချင်စရာပါ။သူ့ကိုတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ဒယ်ဂူး မှာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။
14. Taeil (NCT)
Moon Tae-il ကိုတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ဆိုးလ်မြို့၊ Dongdaemun-gu မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ မွေးနေ့လေးကတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ဇွန်လ ၁၄ ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
15. Hongseok (Pentagon)
မျက်နှာတည်လေးနဲ့ အမိုက်စားBody ကြောင့် လဲ ပရိသတ်တွေကအရမ်းတွေကြွေကြတာပါ။ သူ့ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ Seongnam-si မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ref;Koreaboo,By Bunnie Moreau
သင်မသိသေးတဲ့ သိသင့်တဲ့ မိန်းမများအကြောင်း